October 2020 – Justnow news
ဆင်စွယ်ဂမုန်း – အပင်ရဲ့အမည်က Sansevieria cylindrical လို့ခေါ်ပါတယ်။လိပ်ခေါင်း – ဝက်သား ၁၅ကျပ်သားနဲ့ဆင်စွယ်ဂမုန်းတစ်ချောင်းနဲ့ဟင်းချက်စား၊ တစ်နေ့ထဲကုန်အောင်စားလိပ်ခေါင်းရက်အနည်းငယ်သူ့ဖာသာကြွေကျသွား။အဆိပ်ရှိအင်းဆက်ကိုက်လျင် -ဆင်စွယ်ဂမုန်းကိုရေစင်အောင်ဆေးဆားအနည်းငယ်နဲ့ပျစ်ပျစ်သွေးလိမ်းပေးပါ။ကြောင်ကိုက် ခွေးကိုက် ကြွက်ကိုက်ဒါဏ်ရာများသက်သာစေသည်။နှလုံးသွေးပှု. သွေးဝမ်း. ဆီးဖြူ – ဆီးနီသက်သာအောင်ဆင်စွယ်ဂမုန်းအပေါ်ခွံခွာ ဟင်းချို (သို့) ချဉ်ရေဟင်းချက်သောက်ပါ။ လိပ်ခေါင်း အတွက် ဟင်းချက်နည်း – ဆင်စွယ်ဂမုန်း ၅ ကျပ်သား မြေပဲဆီ/နှမ်းဆီ ၅ကျပ်သား ကြက်သွန်နီ ၂ ကျပ်သားကြက်သွန်အဖြူ ၂ကျပ်သား / ဂျင်း ၂ ကျပ်သား / ဝက်သားအသားသီးသန့် ၁၅ကျပ်သား ချက်ပြီး ထမင်းနဲ့မရော သီးသန့်စားရမည်။နားပြည်ယိုလျှင် – ထုထောင်းကာ သတ္ထုရည်အစက်ချပေးပါ။ဒူလာသွေးဝမ်း ဖြစ်လျင် – ငါးရံ့ ၂၀ သားခန့်ကို ဆင်စွယ်ဂမုန်း တစ်ချောင်းနဲ့ချက်စားပါ။သက်သာ ကောင်းသွားသူလဲရှိသလို မထူးခြားသူကိုလည်း တွေ့ခဲ့သည်။ရောဂါ ပျောက်ချိန်တန်သည့် ကုသိုလ်ကံ ကောင်းခြင်းနဲ့လဲ ဆိုင်ပါတယ်။ Credit – အရှင် ဓမ္မပီယ [unicode] ဆင်စွယ်ဂမုန်း – အပင်ရဲ့အမည်က Sansevieria cylindrical လို့ခေါ်ပါတယ်။လိပ်ခေါင်း – ဝက်သား ၁၅ကျပ်သားနဲ့ဆင်စွယ်ဂမုန်းတစ်ချောင်းနဲ့ဟင်းချက်စား၊ တစ်နေ့ထဲကုန်အောင်စားလိပ်ခေါင်းရက်အနည်းငယ်သူ့ဖာသာကြွေကျသွား။အဆိပ်ရှိအင်းဆက်ကိုက်လျင် -ဆင်စွယ်ဂမုန်းကိုရေစင်အောင်ဆေးဆားအနည်းငယ်နဲ့ပျစ်ပျစ်သွေးလိမ်းပေးပါ။ကြောင်ကိုက် ခွေးကိုက် ကြွက်ကိုက်ဒါဏ်ရာများသက်သာစေသည်။နှလုံးသွေးပှု. သွေးဝမ်း. ဆီးဖြူ – ဆီးနီသက်သာအောင်ဆင်စွယ်ဂမုန်းအပေါ်ခွံခွာ ဟင်းချို (သို့) ချဉ်ရေဟင်းချက်သောက်ပါ။လိပ်ခေါင်း အတွက် ဟင်းချက်နည်း – ဆင်စွယ်ဂမုန်း ၅ ကျပ်သား မြေပဲဆီ/နှမ်းဆီ…
ခြေ သလုံးတောင့် တင်းတတ်သူများအတွက် အိမ်တွင်းဖြစ်ဆေးနည်း
ခြေသလုံံးအကြော တောင့်တင်းသူများ နှစ်ချက် ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ရေချိုးခါနီး ခြေဖဝါး ဆားပွတ်ပြီးမှ ရေချိုးပါ။ ( အပူထုတ် ရေချိုးနည်း လမ်းညွှန်ချက်ကို တင်ထားပြီးပါပြီ )တောင့်တင်းတဲ့နေရာကို မန်ကျည်းရေ ကျဲကျဲနဲ့ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ညှပ်ပြီး ပွတ်ပေးပါ။ ခြေပေးပါ။ ခြေပြီးမှ ရေချိုးပါ။အရွက် သုံးရွက်အနက် ကြိုက်တဲ့အရွက် တစ်ရွက်ကိုသုံးပါ။ ၁ = ကိုရံကြီးရွက်။ ၂ = ဗာဒံရွက်။ ၃ = ငှက်ပျောရွက် ။ ညအိပ်တဲ့အခါ သိပ်တင်းတဲ့‌နေရာကို ပတ်ပြီး အိပ်ပါ။ အရွက်ပတ်တဲ့အခါမှာ နေရောင်ထိတဲ့ဘက်၊ ချောတဲ့ဘက်နဲ့ အသားကိုထိရပါမယ်။သူ့ကို ပတ်တော့မယ်ဆိုရင် အဘွားအသက် ကရမက်၊ အမျိုးသမီး အသက် ကရမက် ဆိုတဲ့အတိုင်း ကရမက်လိမ်းပါ။ ကရမက်က အပူစုပ်မယ်။ ပြီးမှ အရွက်ပတ်၊အရွက်ကလည်း အပူစုပ်မယ်။ တောင့်တာ တင်းတာ အကြောင်းခံက ပူလွန်းးလို့ ။ရာနှုန်းလျော့သွားပါလိမ့်မယ်။ Credit – ဆရာကြီး ဦးရန်အောင် [unicode] ခွသေလုံံးအကွော တောငျ့တငျးသူမြား နှစျခကြျ ဆောငျရှကျပေးပါ။ရခြေိုးခါနီး ခွဖေဝါး ဆားပှတျပွီးမှ ရခြေိုးပါ။ ( အပူထုတျ ရခြေိုးနညျး လမျးညှှနျခကြျကို တငျထားပွီးပါပွီ )တောငျ့တငျးတဲ့နရောကို မနျကညြျးရေ ကြဲကြဲနဲ့…
အဆီကျိတ်အတွက် အစွမ်းထက် သဘာဝဆေးနည်း
ငါကတော့ အဆီကျိတ်(lipomas)ကို သဘာဝဆေးဝါးတွေနဲ့ဘယ်လိုကုကြမလဲပေါ့နော်…သူ့ကို (fatty tumors) ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူတော်တော်များများက စာပို့ပြီး မေးထားကြပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ လူသားတို့၏ အရေပြားပေါ်၌ ဖြစ်တတ်ကြသလို တိရိစ္ဆာန်သတ္တဝါတွေများလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သဘာဝဆေးနည်းအရ ကုသမယ်ဆိုရင် ထိရောက်မှုရှိပြီး လက်တွေ့ ပျောက်ကင်းစေမည့် ဆေးနည်းအချို့ကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။သဘာဝ လိမ်းဆေးဆီ – တမာဆီ(Neem oil) သွေးကိုတိတ်စေပြီး အရေပြားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး များစွာ အထောက်အကူပြုပါတယ်။ နှမ်းကြတ်ဆီ (Flaxseed oil)ဟာ omega-3 and omega-6 များစွာကြွယ်ဝခြင်းကြောင့် အသားရေဖူးယောင်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ လဘ္ဘက်ရည်အေး(Cooled green tea )ဟာ သွေးချိုကို လျော့ကျစေပြီး အကြောအမျှင်ထဲက အဆီတွေကို ကောင်းစွာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ပျားရည်နဲ့ ဂျုံမှုန့် – သဘာဝပျားရည်စစ်စစ်နဲ့ ဂျုံမှုန့်အနည်းငယ်ဖြင့် ရောစပ်ပြီး မိမိရဲ့အဆီကျိတ်အဖုပေါ်ကို ခပ်ထူထူလေး အုံပေးထားပါ။ နောက်တနည်းက နနွင်းမှုန့်(ဆနွင်းမှုန့်)လဘ္ဘက်စားဇွန်းနှင့် တစ်ဇွန်း၊ သံလွင်ဆီ (olive oil) (၂)ဇွန်း၊ ပျားဖယောင်း (beeswax) အနည်းငယ်၊ ငှက်စာပင်ရွက်အမှုန့် (chickweed powder)တစ်ဇွန်း။ အားလုံးကို ရောစပ်ပြီး မီးဖိုပေါ်မှာ ပျစ်တွဲပျစ်ခဲလာသည့်အထိ ကျိုချက်ပြီး အအေးခံ၍ ၎င်းအနှစ်ကို အဆီကျိတ်ပေါ်သို့ ဖိပြီး…
၀ဲႏွင္းခူ လက္ေတြ႔ေပ်ာက္တဲ့ ေဆးနည္း
October 10, 2020 author Comments0Comment
အခုမွ်ေ၀ေပးမွာကေတာ့ ဝဲႏွင္းခူ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေဆးနည္းေလးပါ။ ကြၽန္ေတာ့္သမီး၏ ေျခသလုံးမွာ ဝဲႏွင္းခူအျပည့္ ေပါက္ေနပါသည္။ ကရင္လူမ်ိဳးဖထီးမွ ေပးေသာေဆးျဖစ္ပါသည္။ ႀကဳံတဲ့သူတိုင္း ေဆးနည္းေပး၍ ေပးတဲ့သူမ်ားလည္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းပါသည္။မည္သည့္ ဝဲႏွင္းခူပဲျဖစ္ျဖစ္ ေပ်ာက္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း သုံးေလးဆယ္ ၾကာပါေစ။ မည္သည့္အစားမွ ေရွာင္ရန္မလိုပါ။ တြင္းေအာင္းသားပါ စားႏိုင္သည္။ ေဆးနည္း – ဥနဲ႐ြက္( ေဆး႐ိုး႐ြက္ )၊ ဇီး႐ြက္၊ ထိက႐ုံပင္ အ႐ိုင္း ( ပၪၥငါးပါး )။ ဥနဲ႐ြက္ ႏွစ္ဆ၊ က်န္ ဇီး႐ြက္ ထိက႐ုံပင္ တစ္ဆ၊ တစ္ေန႔လွန္း။ ေျခာက္ရင္ သံျပားပၚမီးတင္ ျပာခ်။ အမႈန႔္ျပဳပါ။ ထိုေဆးအမႈန႔္ကို ေရနံေခ်း ( သို႔ ) အုန္းဆီျဖင့္ လူးေပး႐ုံသာျဖစ္သည္။ Credit – Sai Min Thant – ကိုးကား – နကၡတၱေရာင္ျခည္ [unicode] အခုမျှဝေပေးမှာကတော့ ဝဲနှင်းခူ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆေးနည်းလေးပါ။ ကျွန်တော့်သမီး၏ ခြေသလုံးမှာ ဝဲနှင်းခူအပြည့် ပေါက်နေပါသည်။ ကရင်လူမျိုးဖထီးမှ ပေးသောဆေးဖြစ်ပါသည်။ ကြုံတဲ့သူတိုင်း ဆေးနည်းပေး၍ ပေးတဲ့သူများလည်း သက်သာပျောက်ကင်းပါသည်။မည်သည့် ဝဲနှင်းခူပဲဖြစ်ဖြစ် ပျောက်ပါသည်။ နှစ်ပေါင်း သုံးလေးဆယ်…